Abenzi beNdebe yePET eprintiweyo-iTshayina eprintiweyo yeNdebe yeFET kunye nababoneleli
I-16 oz Ishicilelwe Iiplastiki zePlastiki zePET 92mm ubuchule be 375ml. Izinto eziphathekayo, i-Polyethylene Terephthalate (PET), i-eco-friendly, i-crystal icacile kumbala wokubonakala okuphuculweyo kwaye inokubonelela ngokuzinza okugqwesileyo.I-PET yethu ye-12 oz eprintiweyo yeekomityi zeplastiki ziprintwe ngee-inki ezikhuselekileyo zokutya ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zilungele bonke abathengi bokutya. I-12 oz eziprintiweyo zePET zeplastiki zilungele amabala emidlalo ekhatywayo, iikonsathi, imivalo, ikofu, iminyhadala kunye nokunye. Ngokusetyenziswa okuninzi, zibonelela ngethuba elimangalisayo lokufumana uphawu lwakho, ilogo okanye uyilo ezandleni zabathengi bakho
Kule mini kunye nexesha, ukwakha uphawu kubaluleke kakhulu. iikomityi zeplastiki kunye nelogo yenkampani yakho okanye isiqubulo sokwandisa uphawu lwakho oluyingqayizivele kubathengi bakho, ukuba yinxalenye yephulo lakho lokuthengisa.
iikomityi zeplastiki yongeza ixabiso lenkonzo kubathengi bethu. Sinikezela ngokubeka uphawu kunye neenkonzo zokuprinta ezenziwe ngokwezifiso kuluhlu lwethu lokupakishwa kokutya okulahlwayo kunye nokuprinta okwenziweyo kwiikomityi zeplastiki, iikomityi zekofu, iikomityi ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nokunye!
Singumenzi wobugcisa Ezishicilelweyo PET neNdebe phakathi China Izinto, i-Polyethylene Terephthalate (PET), i-eco-friendly, i-crystal icacile ngombala wokubonakala okuphuculweyo kwaye inokubonelela ngokuzinza okugqwesileyo. Zonke zethuCacisa iiNdebe zePlastiki zePET Ungenziwa ngokwezifiso kwaye uprintwe ngayo nayiphi na into oyibonayo kwaye umyili wethu ongaphakathi endlwini ulapha onke amanyathelo endlela, unceda ukuzisa izimvo zakho ebomini!